शेयर « Deshko News
सेयर कारोबार अब शुक्रबार पनि हुने
काठमाडौं, जेठ ३०सेयर बजार कारोबार अब ६ दिन सन्चालन हुने भएको छ । सरकारले आइतबारको सार्वजनिक बिदा हटाएका कारण अब सेयर कारोबार ६ दिन नै हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी
आजबाट ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको आईपीओ खुल्यो, कतिसम्म दिने आवेदन ?
काठमाडौं, चैत्र ८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुला गरेको छ। कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका ३१ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। निष्काशन गरिएको
राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो, भर्ने होइन ?
काठमाडौं, फागुन ४राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री खुला गरेको छ । लघुवित्तले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा ८ करोड ५० लाख मूल्य
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँट, तपाईलाई पर्याे कि होइन ? यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडौं, फागुन १जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा आज
सेयर बजारमा हरियाली, यी हुन् सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनी
काठमाडौं, माघ १६पहिलो दिन आज सेयर बजार बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक १०५.५५ अंकले बढेर २८८५.५३ विन्दूमा पुगेको छ। दिनभरीमा २३१ कम्पनीको १ करोड २१ लाख ५५ हजार ४३२ सेयर
यी ५ कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुँदै
काठमाडौं, माघ ७ शेयर बजार उकालो लागिरहेकै बेला ५ वटा कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अन्तिम स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ
सामलिङ्ग पावरको आईपीओ आजबाट बिक्री खुला, क-कसले भर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं, भदौ १८ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आज (शुक्रबार)देखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित इलाम जिल्लाका स्थानीयहरुका
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट,कसलाई कति कित्ता पर्यो ?
काठमाडौं, असार २८मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । लघुवित्तको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलको कार्यालयमा बिहान ९ः३० बजे सो आईपीओ बाँडफाँट भएको हो
शेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, कुन–कुन कम्पनीले कमाए धेरै ?
काठमाडौं, माघ २९ शेयर बजारमा आज साताको कारोबारको अन्तिम दिन दोहोरो अंकले गिरावट आएको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १६.११ अंकले घट्दा बजार २५२६.९२ विन्दुमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले
युनाइटेड इदी–मर्दी एण्ड आरवि हाईड्रोपावरको शेयर कारोबार आइतवारदेखि
काठमाडौं, पाैष ४युनाइटेड इदी–मर्दी एण्ड आरवि हाईड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ पुस ३ गते शुक्रवार धितोपत्र दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण तर्फको